Vadiwa vadzidzi, pane mazana ezvidzidzo zveGerman pane yedu saiti. Pamusoro pezvaunokumbira, takaisa izvi zvidzidzo zvevadzidzi vepuraimari nesekondari uye tikazvikamura kuva makirasi. Isu takakamura zvidzidzo zvedu zveGerman zvakagadzirirwa zvinoenderana nedzidzo yenyika dzidzo yakashandiswa munyika medu yevadzidzi vegiredhi regumi uye takazvinyora pazasi.
Pazasi pane runyorwa rwezvidzidzo zvedu zveGerman zvinoratidzwa kuvadzidzi vegiredhi regumi munyika yedu yese. Iyo yeGerman unit runyorwa pazasi iri muhurongwa kubva pazviri nyore kusvika zvakaoma. Zvisinei, kurongeka kwemisoro yacho kunogona kuve kwakasiyana mune mamwe mabhuku echiGerman uye mamwe mabhuku ekuwedzera.
zvinzvimbo zvinoratidzwa kazhinji kusvika kugumi yegumi turkey zvinosanganisira, asi zvingasakwanise kugadzirisa mamwe mayuniti zvinoenderana nezvinodiwa nemudzidzisi wechiGerman, kana zvinogona kuwedzerwa sezvikamu zvakagadziriswa, mamwe mayunitsi anogona kubvumidzwa, kureva 10 kirasi kukirasi inotevera kana mayuniti akati wandei angangoshandiswa panguva yekirasi yechi11. Nekudaro, misoro yakafukidzwa mugumi yegumi zvidzidzo zveGerman mune zvese zvinotevera.
10th Giredhi Zvidzidzo zveGerman
ChiGerman Multiple Zvikamu
ChiGerman Mubvunzo Zvikamu
ChiGerman Was ist das?
ChiGerman ein eine Zvinyorwa zvisinganzwisisike
ChiGerman Chako Chirevo
ChiGerman Gehen Verb Conjugation
ChiGerman Interrogative Pronouns
ChiGerman Shopping Vocabulary uye Mitsara Yekutenga
Vadiwa vadzidzi, misoro yakafukidzwa mugiredhi yegumi zvidzidzo zveGerman kazhinji zviri pamusoro. Tinokushuvirai mese kubudirira.
# 10th Giredhi Zvidzidzo zveGerman
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi gumi nemaviri yapfuura, musi wa12 Zvita 08, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa musi wa2020 Zvita 24.
Chii chinonzi dativ
ChiGerman Adjectives uye maGerman Adjectives
Tags: 10. kirasi zvidzidzo zvese, 10. kirasi german nyaya inotaura, German 10. class presentation